Posted by Ashin Janaka at Wednesday, March 27, 2013
Dhammahita Foundation said...
this is memorable photos as you have described in your words and scripts. weldone! I like it, sadhu sadhu sadhu!
very nice and natural views
Thanks for your comment which makes me really encouraged for further posting on my blog.
ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းမှကောင်း..ဘုရား။
ဟုတ်ပါ့ ဆရာနတ်ရေ။ အခါလွန်သလား အလာလွန်သလားတော့ မသိဘူး။ ကြောက်ရလောက်အောင် ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်။
သွားစရာမရှိ မင်းဂန်ရွာချည်း လှိမ့်သွားဖြစ်တော့ အဲဒီနားတ၀ိုက်က ဓါတ်ပုံတွေ ဟာ့ဒစ်စ်ခ်ထဲ ပြည့်လုနီးနီးရယ်။း)
မင်းဂန်ဆရာတော်ကို ဦးခိုက်ပူဇော်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါ့မယ်။
30 March 2013 at 18:52